अहिंसाको लागि मार्च ल्याटिन अमेरिका हुँदै यात्रा गर्दछ - वर्ल्ड मार्च
घर » हाम्रो बारेमा » आधिकारिक संचार » अहिंसाको लागि मार्च ल्याटिन अमेरिका हुँदै यात्रा गर्दछ
20 / 06 / 2021 20 / 06 / 2021 द्वारा व्यवस्थापक विश्व मार्च
एउटा मार्च बहुसंख्यक र बहुसंस्कृति ल्याटिन अमेरिका को अहिंसा को लागी यात्रा गर्दछ
यो कसैलाई पनि अपरिचित होइन कि हिंसा लामो समय देखि ग्रह मा स्थापित छ।
ल्याटिन अमेरिकामा जनताले बिभिन्न घोर भिन्नताका साथ हिंसात्मक तरिका त्याग्छ जसले समाजलाई व्यवस्थित गर्दछ र भोक, बेरोजगारी, रोग र मृत्युको परिणामस्वरूप मानिसहरुलाई पीडा र कष्टमा डुबाउँछ। यद्यपि हिंसाले हाम्रो जनतालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
शारीरिक हिंसा: संगठित हत्या, मानिस बेपत्ता हुनु, सामाजिक विरोधको दमन, फेमिसाइड्स, मानव बेचबिखन, र अन्य अभिव्यक्तिको बीच।
मानवअधिकारको उल्लंघन: कामको अभाव, स्वास्थ्य सेवा, आवासको अभाव, पानीको अभाव, जबरजस्ती पलायन, भेदभाव, आदि।
इकोसिस्टमको विनाश, सबै प्रजातिहरूको बासस्थान: मेगा-खानी, कृषि-विषाक्त फोमिगेशन, वन फँडानी, आगो, बाढी, आदि।
एउटा विशेष उल्लेख मूल निवासीहरूसँग मिल्छ, जसले आफ्नो भूमिबाट वञ्चित भएका थिए, उनीहरूको अधिकार दिनहुँ हनन भएको देखेर सीमान्तको जीवनमा धकेल्छन्।
के हामी घटनाहरूको दिशा बदल्न सक्छौं कि हेराल्ड आयामका मानवीय आपतकालहरू पहिले कहिल्यै थाहा थिएन?
के भइरहेको छ त्यसको लागि हामी सबैको केही जिम्मेवारी छ, हामीले निर्णय लिनुपर्दछ, हाम्रो आवाजलाई एकताबद्ध गर्नुपर्दछ, हाम्रो सोचाइ, सोच, भावना र समान रूपान्तरण दिशामा कार्य गर्दै। अरूले त्यसो गरेको आशा नगरौं।
विभिन्न भाषाहरू, जाति, विश्वास र संस्कृतिहरूका लाखौं मानवहरूको मिलन अहिंसाको प्रकाशले मानवीय अन्तस्करण प्रज्वलित गर्न आवश्यक छ।
विश्व विना युद्ध र हिंसा संघ, मानवतावादी आन्दोलनको एक जीव, प्रचार र संगठित भएको छ अन्य समूहहरु संग, मार्चहरू कि एक अहिंसक अन्तस्करण ब्यूँझाउने उद्देश्यले यी क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्छन् जसले धेरै मानवीय दिशामा विकास गरेको सकारात्मक कार्यहरू देखिने बनाउँदछ।
यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोनहरूः
२०० -2009 -२०१० शान्ति र अहिंसाको लागि पहिलो विश्व मार्च
२०१-- पहिलो मध्य अमेरिकी मार्च
२०१-- पहिलो दक्षिण अमेरिकी मार्च
2019- 2020। दोस्रो विश्व मार्च
२०२१- आज हामी ठूलो आनन्दका साथ एक नयाँ मार्चको घोषणा गर्छौं, यस पटक भर्चुअल र आमनेसामने, हाम्रो प्रिय क्षेत्रभरि सेप्टेम्बर १ 2021 देखि अक्टोबर २ सम्म - FIRST मार्च ल्याटिन अमेरिका- NOVIOLENCE द्वारा बहु-जातीय र रचयात्मक.
हामी आफैंसँग सम्पर्क राख्नको लागि पहिलो पटक यात्रा गरिरहेका छौं, किनकि यात्राको पहिलो मार्ग भित्री मार्ग हो, हाम्रो दृष्टिकोणमा ध्यान दिंदै, आफ्नै आन्तरिक हिंसालाई जित्न र आफूलाई दयालु व्यवहार गर्न, आफूलाई मेलमिलाप गर्न र एकतामा बाँच्न इच्छुक र आन्तरिक ड्राइभ
हामी हाम्रो सम्बन्धमा गोल्डन नियमलाई केन्द्रीय मानको रूपमा राख्छौं, त्यो हो कि अरूहरूसँग हामी व्यवहार गर्ने तरिकालाई व्यवहार गर्छौं।
हामी संघर्षलाई सकरात्मक र रचनात्मक तरिकामा समाधान गर्न सिक्छौं, यस संसारमा रूपान्तरण गर्ने अवसर पाएका छौं।
हामी महाद्वीपको यात्रा गरीरहेका छौं, अक्षरशः र व्यक्तिगत रूपमा, आवाजलाई सुदृढ पार्नका लागि जुन अझ बढी संसारको लागि कराउँदछ मानव हामी अब हाम्रा सँगी मानिसहरूमा यति धेरै दु: ख देख्न सक्दैनौं.
संयुक्त ल्याटिन अमेरिकी मानिसहरु, क्यारिबियन, आदिवासी मानिसहरु, अफ्रो-वंशजहरू र यस विशाल भूभागका बासिन्दाहरू, हामी हिंसाका विभिन्न रूपहरू प्रतिरोध गर्न र ठोस र अहिंसक समाज निर्माण गर्न लामबन्द र मार्च्यौं।
छोटकरीमा, हामी परिचालन र मार्च गर्न:
1- हाम्रो समाजमा अवस्थित सबै प्रकारका हिंसाको प्रतिकार र रूपान्तरण गर्नुहोस्: शारीरिक, लि gender्ग, मौखिक, मनोवैज्ञानिक, वैचारिक, आर्थिक, जातीय र धार्मिक।
2- गैर भेदभावपूर्ण सार्वजनिक नीतिको रूपमा गैर भेदभाव र समान अवसरहरूको लागि लड्नुहोस्, धनको उचित वितरण सुनिश्चित गर्न।
3- ल्याटिन अमेरिका भरिका हाम्रो मूल मानिसहरुको प्रतिशोध गर्नुहोस्, उनीहरूको अधिकार र तिनका पुर्खा योगदानलाई मान्यता दिदै।
4- त्यो राज्यले द्वन्द्व सुल्झाउने उपायको रूपमा युद्ध प्रयोग त्याग्छ। सबै प्रकारका हतियारहरूको अधिग्रहणको लागि बजेटमा कमी गर्नुहोस्।
5- भन्नुहोस् विदेशी सैन्य अड्डाहरूको स्थापनालाई होइन, अवस्थितको फिर्ताको माग गर्नुहोस्, र सबै विदेशी क्षेत्रहरु मा दखल.
6- क्षेत्रभर आणविक हतियारहरूको निषेधको लागि सन्धिको हस्ताक्षर र अनुमोदनको प्रचार गर्नुहोस्। Tratelolco II को सन्धि को निर्माणको प्रचार गर्नुहोस्।
7- हाम्रो ग्रह अनुरूप एक विश्वव्यापी मानव राष्ट्र निर्माण को पक्षमा देखिने अहिंसात्मक कार्यहरू गर्नुहोस्।
8- अहिंसा सामाजिक वातावरणमा नयाँ पुस्ताले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न र विकास गर्न सक्ने ठाउँहरू बनाउनुहोस्।
9- इकोलोजिकल स crisis्कट, ग्लोबल वार्मिंग र ओपन-पिट खानी, वन फँडानी र बालीनाशक विषादीको प्रयोगले उत्पन्न हुने गम्भीर जोखिमको बारेमा जागरूकता जगाउनुहोस्। पानीमा प्रतिबन्धित पहुँच, एक अपरिहार्य मानव अधिकारको रूपमा।
10- सबै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक विकृतिलाई बढावा दिनुहोस्; नि: शुल्क ल्याटिन अमेरिकाको लागि।
11- यस क्षेत्रका देशहरू बीच भिसा हटाएर ल्याटिन अमेरिकी नागरिकको लागि राहदानी बनाएर व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र आवागमन प्राप्त गर्नुहोस्।
हामी क्षेत्रको भ्रमण गरेर र एकता सुदृढ बनाउने कामना गर्दछौं ल्याटिन अमेरिकाले खोजमा हाम्रो साझा इतिहास पुन: संरचना गर्दछ विविधता र अहिंसा मा अभिसरण को।
मानिसहरु को विशाल बहुमत हिंसा चाहँदैन, तर यसलाई हटाउन असम्भव देखिन्छ। यस कारणका लागि हामी बुझ्दछौं बोक्न बाहेक सामाजिक कार्यहरू गर्नु, हामीले विश्वासको समीक्षा गर्न काम गर्नुपर्दछ कि यो कथित अपत्यारणीय वास्तविकता वरपर छ। हामीले गर्नैपर्छ हाम्रो भित्री विश्वासलाई परिवर्तन गर्नुहोस् जुन हामी परिवर्तन गर्न सक्दछौं, व्यक्तिगत रूपमा र एक समाज को रूप मा।
यो हिंसाको लागि कनेक्ट गर्न, परिचालन गर्ने र मार्च गर्ने समय हो
ल्याटिन अमेरिका मार्फत मार्चमा अहिंसा।
थप जानकारी: https://theworldmarch.org/marcha-latinoamericana/ र मार्च र यसको प्रक्रिया: पहिलो ल्याटिन अमेरिकी मार्च - वर्ल्ड मार्च (theworldmarch.org)
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामीलाई पछ्याउनुहोस्:
@ j Journalofviolence
यो म्यानिफेस्ट डाउनलोड गर्नुहोस्: अहिंसाको लागि मार्च ल्याटिन अमेरिका हुँदै यात्रा गर्दछ